Rina sakafo | Nutri Diet
Ny sakafo dia manampy antsika hihena amin'ny fotoana iray amin'ny fiainantsika, raha mieritreritra ny hihena ianao dia holazainay aminao eto ambany ny sakafo rina, sakafo maharitra 90 andro na telo volana.
Ity sakafo ity dia mampanantena fiovana ara-batana ao anatin'ny telo volana nefa tsy mosarena ary tsy afaka mihinana tsara ny zava-drehetra. Sakafo iray izay mahasoa ihany koa mahatsapa mazoto kokoa ary amin'ny toe-tsaina tsara kokoa.
Ity sakafo ity dia natokana ho an'ireo izay te ho very kilao vitsivitsy ary tsy maika hanatratra azy, amin'ny fanaovana azy miadana dia tonga lafatra mba hisorohana ny effets yoyo na effet rebound izay mahatonga antsika matavy haingana.
1 Mampiavaka ny sakafo rina
1.1 Ahoana ny fanarahana ny sakafo
2 Ny andro amin'ny sakafo
3 Tombontsoa azo avy amin'ny sakafo rina
Mampiavaka ny sakafo rina
Arahina ity sakafo ity 3 volana na 90 androNoho izany, ny fampahalalana momba azy dia azo jerena amin'ity anarana ity ihany koa. Ny vatana dia mampianatra tsikelikely ny tenany ary mampitombo ny fandaniana kalorika amin'ny fampitomboana ny metabolisma. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo sakafo mahasalama indrindra hampihena ny lanjany soa aman-tsara.
Na dia maneho hevitra foana aza izahay dia zava-dehibe ny manatona dokotera manam-pahaizana manokana, endocrinologist na dokotera momba ny fikasantsika hampihena sy handany kilao.
Mizara efatra ity sakafo ity:
Proteinina niavian'ny biby na legioma: akoho, turkey, henan-kisoa, hen'omby, ronono, atody, fromazy, trondro.
Gliosida tsotra: soja, lentil, sipa, vary, ovy.
Karbônina be pitsiny: sakafo misy lafarinina fotsy sy feno varimbazaha, mofo, semolina couscous, paty.
Vitamina: voankazo sy legioma.
Isan'andro mandritra ny faharetan'ny sakafo dia hihinana ny sakafon'ny vondrona iray ihany isika. Amin'izay ny vatana dia hianatra misaraka amin'ny sakafo ary hanomboka hilamina ny metabolisma.
Ahoana ny fanarahana ny sakafo
Mba hampiharana tsara ny sakafo dia tsy maintsy arahana ireto toro lalana manaraka ireto:
Ho an'ny desayuno Tsy afaka mihinana voankazo ianao raha tsy amin'ny 12 ora antoandro.
Tokony horaisina izy ireo Sakafo 5 isan'andro.
La vidiny Tsy maintsy atao alohan'ny 20:XNUMX tolakandro izany.
Tsy afaka misotro ranon-javatra alohan'ny na aorian'ny fisakafoanana ianao mba tsy ho diloilo ny ranon-tsavony ary afaka mihetsika mivantana amin'ny sakafo.
ny sakafo ny sakafo dia tokony hanana indroa ny sakafo hariva.
Tsy mahazo mandray toaka na kafeinina.
Ny fihinanana Rano 2 litatra isan'andro, na infusions na rano misy tsiro voajanahary.
Adiny 3 no tokony handeha eo anelanelan'ny sakafo lehibe.
Amin'ny faha-29 isam-bolana, sakafo iray no hotanterahina fanadiovana mifototra amin'ny rano ihany.
Ny andro amin'ny sakafo
Eto izahay dia milaza aminao ny fomba tokony hanarahana ny sakafo hanatanterahana azy tsara tsy hanimba ny fahasalamana sy hanatanterahana azy tsara.
Andro 1: proteinina. Ny voankazo maraina dia tsy misy afa-tsy ny voankazo sy ny sisa amin'ny sakafo misy sakafo misy proteinina toy ny hena, atody na ronono. Eny, afaka mihinana legioma ianao nefa misy atiny misy proteinina be.
Andro 2: Starches. Mandritra ny sakafo maraina dia hanana voankazo sy ny andro sisa isika, vary, legioma, ovy miaraka amin'ny legioma voatabia na nandrahoina.
Andro 3: gliosida sarotra. Ny sakafo maraina dia voaforon'ny voankazo sy ny sakafo fihinan'ny gliosida ary ny mamy sasany.
Andro 4: Vitamina. Ny voankazo ho an'ny sakafo maraina sy ny andro sisa dia hoatsatsaho, halefaina, hanono na hatao andraho.
Mba hampanan-kery ny sakafo ao amin'ny vatantsika dia tsy maintsy manaraka an'ity filaharana sy filaharan'ny sakafo ity isika satria amin'izany dia afaka mampihena ny lanja sy mampihena ny volantsika amin'ny fahafaham-po isika.
Ny salady sy ny legioma dia tsy maintsy asiana menaka oliva kely, vinaingitra, voasarimakirana ary sira kely. Ho fanampin'izany, tsy maintsy miaraka amin'ity sakafo ity sy ity sakafo ity isika amin'ny fampihetseham-batana, toy ny mandeha an-tongotra, mihazakazaka, mihazakazaka, mandeha bisikileta, milomano na manao spaoro raketa.
Tokony hataontsika mihinana sakafo 5 isan'andro, sakafo atoandro kely ary sakafo kely, izay mety ho voanjo vitsivitsy, fampidirana, yaourt na voankazo iray. Ny ron-kena legioma koa avela hisoroka ny fahatsapana hanoanana masiaka.
Tombontsoa azo avy amin'ny sakafo rina
Ny sakafo rehetra, na tsara toa inona aza, dia hanana foana mpanaratsy y mpiaro, Na izany aza, amin'ity tranga ity, mahita tombony maromaro izay tsy tokony halainao ianao.
Saraho tsara ireo vondrona sakafo mba hanombohan'ny vatana hanasaraka ny sakafo amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny metabolisma handoro kaloria bebe kokoa.
Ity sakafo ity dia mety ho ny sakafonao farany indrindra raha manao izany mifanaraka amin'ireo dingana voalaza ianao.
Ho very ny volanao any amin'ny faritra lafo indrindra, sandry, kibo, vody, valahana, tongotra.
Miaraka amin'ny fanampian'ny kely fanatanjahan-tena hahazo vatana mahia sy tsara tarehy ianao.
Ity iray ity sakafo Natao ho an'ny olon-dehibe te hihena.
Tsy manana vokany.
Tsy mamokatra tsy fahampiana ara-tsakafo.
Raha mitady fomba hampihenana lanja ianao, ho anao io sakafo io, manome tombony ary tsy mamokatra effets yo-yo. Ho fanampin'izany, dia mety ho regimen hizarana amin'ny fianakaviana satria tsy mampidi-doza. Manontania dokotera amin'ny fianakavianao momba ny fikasanao hampihena ny lanjany mba hahafahany manoro hevitra anao momba ny toro lalana rehetra harahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo Rina